ED government in SA charm offensive as economy takes tumble - NewZimbabwe.com ED government in SA charm offensive as economy takes tumble - NewZimbabwe.com
ED government in SA charm offensive as economy takes tumble
16th October 2018 Business, Economy
THE Zimbabwean government on Tuesday embarked on a charm offensive to woo investors in South Africa during “Zimbabwe is open for business” summit held in Johannesburg.
Hosted by Zimbabwe’s embassy in South Africa, the summit attracted numerous government officials, diplomats, businesspeople, local and international media, and some Zimbabweans based in different parts of South Africa.
“Zimbabwe is a rich and enchantingly beautiful country blessed with welcoming, friendly, hardworking, highly skilled, resourceful, and resilient people. Currently, the news about Zimbabwe is dominated by the old, tired, largely depressing narrative about economic challenges and hardships facing this country of immense opportunity,” said Hamadziripi.
He said the summit, which was also attended by South African businesspeople working with Zimbabwe, was Harare’s effort to woo more international players into the economy which previously endured hyperinflation of biblical proportions.
“Zimbabwe will rise again through the support and contributions of its friends and partners. This is why we are here. We are looking for partners in reviving, reforming, and regenerating our economy,” said Hamadziripi.
“Since coming into office some 10 months ago, our President [Emerson Mnangagwa] has been consistent in words and actions in pronouncing and pursuing policies and measures to create a market-led private sector driven economy in Zimbabwe.”
“In short, [the] government is committed and determined to make sure that all investments grow in a safe and enabling environment. Our vision is to transform Zimbabwe and have it join the ranks of prosperous, upper-middle-income countries by 2030.